Iwe unosuwa iyo Unity desktop? Kugoverwa uku kunounza kwauri zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unosuwa iyo Unity desktop? Kugoverwa uku kunounza kwauri (kana iwe uchibhadhara)
Diego ChiGerman Gonzalez | | Kugoverwa, General, Free Software, Linux software
Inotevera Kubvumbi 23 uyeEdzeka edhisheni dzeUbuntu 20.04 Focal ichave iripo Fossa. Sezvo mazuva achifamba, zvigadzirwa zvakagadzirwa nevechitatu mapato zvichawedzerwa. Asi, kana ukapotsa Kubatana, unogona kufarira iyi imwe nzira. yakavakirwa paFocal Fossa.
Rangarira kuti zvinyorwa zvepamutemo zveUbuntu ndizvo
Ubuntu: Ndiyo vhezheni yepakutanga ine iyo GNOME desktop uye zvimwe zvinoshandurwa.
Kubuntu: Inosanganisira iyo KDE chirongwa che desktop uye application ecosystem.
Lubuntu: Shanduro yezvikwata zvakapusa. Shandisa iyo LXQT desktop uye iyo Calamares simaki.
Ubuntu Kylin: Kugoverwa kunoitirwa kumusika weChina.
Ubuntu Mate: Mate idesktop risingaremi. Iyi forogo yeiyo yapfuura GNOME bazi.
Ubuntu Budgie: Yakagadzirwa neSolus projekiti, Budgie idesktop inogadziriswa uye inooneka inofadza.
Xubuntu: Shanduro ine XFCE desktop. Iyo inogadziriswa kwazvo desktop nharaunda kunyangwe ichishandisa mashoma zviwanikwa.
Ubuntu Studio: Inounza iyo Mate desktop uye yakanyatsogadzirirwa kugadzirwa kwemultimedia.
Ukasuwa Kubatana, unogona kuedza Umix OS
1 Iwe unosuwa iyo Unity desktop? Iyi Umix OS
1.1 Kuisa maapplication
1.2 Iyo yekupedzisira
1.3 Inosanganisirwa software
2 Tsanangudzo shoma.
Iwe unosuwa iyo Unity desktop? Iyi Umix OS
Kubatana kwaive kwemakore mashoma iyo desktop yeiyo yepamutemo vhezheni yeUbuntu. Parizvino nkana ichiri kugadziridzwa saka avo vane basa neUmix vaifanira kugadzirisa zvimwe.
Ivo vanofunga kuti Nautilus, iyo GNOME faira maneja (iyo zvakare inoshandisa Kubatana) yakanga ichirasa maficha neyakaregedzwa nyowani. Semuenzaniso, iyo inongedzo yemushandisi yave kuwedzera minimalist uye inokodzera mapiritsi uye ekugunzva skrini pane echinyakare desktops.
EIyi vhezheni yeUmix inoshandisa Caja, Mate faira faira maneja. Izvi zvinosanganisira kuisirwa kwekuwedzera kwekuwedzera kwako. De Mate akagamuchirwawo iyo yekugadzirisa wizard iyo mune ino kesi inotsiva iyo yekutanga Kubatana. Izvi zvinopa mamwe mabasa anowanikwa nekudzvanya kurudyi mbeva bhatani kana iyo faira zvivakwa tebhu.
Nekuremekedza Wallpaper, ivo havana kugadzira yavo, asi vakasarudza kushandisa mafoto kubva kune Unplash saiti.
Kufanana nekumwe kumwe kugovera, Umix inosanganisira skrini yekutambira inotibatsira kusarudza zvinoshandiswa tinoda kuisa. Mune menyu padivi tinogona kubaya pazvinhu kuti uzviwane zviri nyore.
Iyo yekupedzisira emulator iri pasina mubvunzo chimwe chezvinhu zvakanakisa Linux zvine. Uye Umix OS inotibvumidza kuti tiiwane nyore.
Kudzvanya F1 kunovhura pop-up terminal hwindo. Iyi terminal inogara ichimhanya kumashure. Zvinotaridza sezvatakataura paunodzvanya F1 uye ukahwanda paunotamira kune rimwe hwindo.
Meseji inoratidzwa neiyo terminal inosanganisira mitsara miviri. Mutsara wekutanga unoratidza iyo iriko nguva, zita rekushandisa, zita remubati uye dhairekitori razvino, mutsetse wechipiri unoratidza mamiriro emirairo yekupedzisira (girini kana tsvuku) uye inogamuchira mushandisi yekuisa.
Iyo default Shell ndeyeBash, asi hove uye zsh, pakati pevamwe, zvinogona zvakare kushandiswa.
Kuiswa kudiki kunouya neChromium browser, VLC media player, Synaptic, GParted, uye Tilix terminal emulator.
Kuiswa kwakazara kunounza zvirongwa zvinotevera
LibreOffice: Multiplatform hofisi suite.
Thunderbird: Email mutengi uye khalendari maneja.
Gimp: Mufananidzo mupepeti.
Shutter: Chirongwa chekutora skrini.
Peek: Chirongwa chekugadzira maGIF ane hupenyu.
Kazam: Desktop kurekodha chirongwa.
Boporodzi: Mutengi kune rwizi network.
Rhythmbox: Management uye kutamba kwemimhanzi kuunganidzwa
Pidgin: Instant mameseji mutengi.
Pitivi: Vhidhiyo mupepeti.
Chese: Chirongwa chekutungamira iyo webcam webhu.
Shotwell: manejimendi ekutora mifananidzo.
Nyore Scan: Graphical interface yekunyora gwaro.
DejaDup: Chishandiso chekugadzira uye kudzorera backup makopi.
Baobab: Chishandiso chekuongorora dhisiki
Remmina: manejimendi ematafura ari kure.
Timeshift: Chimwe chishandiso chekuchengetedza.
UGet: Mutariri wekurodha pasi.
SMPlayer: Multimedia mutambi ane akasiyana graphic madingindira.
Kana iwe uchida kuve nekwaniso yeiyo yekurodha link, iwe uchafanirwa kuenda ku Checkout. Zvinodhura madhora gumi nemashanu nePaypal (mubhadharo wenguva imwe). UyeIzvi zvinovimbisa kuti iwe uchagamuchira chinongedzo chega chega vhezheni vhezheni yakaburitswa. Ruramisiro yavanokupa ndeiyi:
Mutengo wekunyorera ndewebasa rakabatanidzwa mukumisikidza kugovera uye kuona kuti zvese zviri kushanda nemazvo. Kana iwe usiri kuda kubhadhara iyo, iwe unogona kukopa iyo yepamutemo Ubuntu ISO uye wozvigadzirisa iwe sezvaunoda. Kune akawanda tutorials pamhepo pakuita izvi. Iko kune kunyange mamwe eUkubatana-kwakavakirwa kugovera kunowanikwa. Kutenga kunyorera kunokuponesa iwe nguva uye kuyedza kwekugadzira yako wega kugovera.
Kutenda asi kwete ndatenda
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iwe unosuwa iyo Unity desktop? Kugoverwa uku kunounza kwauri (kana iwe uchibhadhara)
Kubatana kwaive nedzimwe pfungwa dzakanaka. Ini ndinofunga Canonical inogona kuunza zvimwe zvechiitiko icho kwazvino desktop uchishandisa Gnome-Shell yekuwedzera.
- Doko: nemarara anogona kumucheto uye yekutanga application kumusoro.
- Iyo dash: iyo Gnome yazvino inondiuraya, iko kuraswa kwese kwenzvimbo, iine mahombekombe akakura, kutora iyo skrini yese ... kufamba neiyo touchpad inoshatirisa.
Kubatana kwaive nebasa rekusiya Ubuntu neusiku akateedzana mafomu akagadziridzwa eiyi sisitimu yekushandisa yakamira kushanda, ndakachinjira kuDebian uyezve MX-linux ndikadzidza zvakawanda nezveGNU. Ndatenda…!! Ubuntu
TimescaleDB, yakavhurwa sosi dhatabhesi yekuchengetedza nguva dzakateedzana data
Ko zvakadii Houseparty?. Iko kusahadzika pamusoro peimwe yeanonyanya kufarirwa mafomu eiyo yekuisa kwega